macruufka 9 - iPhone News | Wararka IPhone (Bogga 3)
IOS 9 ma lagu rakibi karaa iPhone 4S?
Jawaabtu way fududahay: haa waad rakibi kartaa macruufka 9. Laakiin waa inaad si cad u cadeysaa xoogaa oo maqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan kaaga sheegno dhamaan fursadaha.
IOS 9 waxaa ku jira ikhtiyaarka lagu keydinayo PDF-ga iBooks
Imaatinka macruufka 9 waxaan awoodi doonnaa inaan keydinno boggaga qaab PDF ah oo aan u dhoofino arjiga iBooks
Habka keydinta batteriga ee iOS 9 wuxuu kaloo yareynayaa waxqabadka iPhone-ka
Ka shaqeysiinta habka keydinta batteriga ee iOS 9 wuxuu sababayaa in iPhone-gaagu si gaabis ah u socdo. Soo ogow sida loo joojiyo qaabkan si mobiladu dhaqso ugu socdo.
IOS 9 ayaa noo oggolaan doonta inaan ku keydinno bogagga internetka iyo dukumiintiyada kale PDF
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee la imaan doona macruufka 9 waxay noqon doontaa suurtagalnimada in lagu keydiyo bogagga internetka iyo noocyada kale ee dukumiintiyada sida PDF-ka ee barnaamijka iBooks.
Muuqaalka cusub ee iOS 9 wuxuu si toos ah uga tirtiri doonaa barnaamijyada markay cusbooneysiinayaan
Astaamaha cusub ee macruufka 9 ayaa la helay. Mid ka mid ah ayaa ah awooda si toos ah looga tirtiri karo codsiyada si loo helo meel cusbooneysiin ah.
Dhammaan wararka ku jira macruufka 9 beta 2
Marka la eego beta-kii labaad ee iOS 9 horeyba waa loo cadeeyay, waxaan kuu sheegi doonaa waxa wararka oo dhan ah (in kastoo aan ogaan karno xitaa intaa ka sii badan) nooca cusub.
Sida loo diiwaangaliyo si loo rakibo iOS 9 beta beta
Bisha Luulyo, Apple wuxuu ufududeyn doonaa iOS 9 beta beta oo ay heli karaan kuwa aan soosaarayaasha aheyn.Halkan waxaa ku qoran sida looqeexiyo si loo rakibo.
9 Cydia tweaks in Apple ku dili doono macruufka 9
Waxa ugu fiican ee ku saabsan JAILBREAK waa in Apple ku darayaa ugu fiican Cydia tweaks in macruufka. Qoraalkan, waxaan ku tusineynaa 9 isbeddel oo iOS 9 ka fariisanayo
Soosaarka maqalka ee iOS-ka ayaa aad uga fiicnaan doona iOS 9
Tifaftirka maqalka iyo abuurista ee iOS-ka ayaa aad uga wanaagsanaan doona imaatinka macruufka 9. Apple wuxuu kudarsanayaa taageero buuxda maqal-dhejisyada
Adeegsiga Fariimaha ee iOS 9 waxaan ku furi karnaa kuna keydin karnaa noocyo kale oo feylal ah
Waad ku mahadsantahay macruufka 9 betas waxaan arkeynaa sida codsiga Mail uu leeyahay astaamo cusub sida suurtagalnimada in kuwa cusub lagu dhajiyo iCloud Drive
macruufka 9 waxaa ka mid ah calaamadeynta si loo sharaxo lifaaqyada emaylka
IOS 9 waxaa ku jira Markup, ikhtiyaar horeyba uga jiray OS X Yosemite oo noo ogolaanaya inaan sharraxaad ka bixinno, tusaale ahaan, sawirrada lagu soo diray boostada
Hal toddobaad tijaabinta macruufka 9 Beta 1
Toddobaad ka dib adoo adeegsanaya iOS 9 waxaan ku hayaa dareenkeyga Apple beta-kii ugu horreeyay.
IOS 9 ayaa noo oggolaan doonta inaan ku kaydinno faylasha iCloud Drive
Mid ka mid ah sheekoyinka wanaagsan ee macruufka 9 waa imaatinka dalabka asalka ah ee loo yaqaan 'iCloud Drive'. Hadda waxaa la ogaaday inaan awoodi doonno inaan halkaas ku keydinno feylal
iOS9 ayaa noo oggolaan doonta inaan ku duubno cayaaraha fiidiyowga ee 'ReplayKit'
IOS 9 waxaa ku jira API cusub oo loo yaqaan 'ReplayKit' kaas oo noo oggolaan doona inaan duubno shaashadda iPhone-ga, gaar ahaan ku habboon duubista cayaarahayaga.
3 codsi oo kale oo aan ka tirtiri karin macruufka 9
Saddex codsi oo cusub ayaa ku soo biiraya liiska dheer ee codsiyada aan waxtar lahayn ee aan waligeen ku isticmaalin qalabkeenna.
Isbarbardhiga sawirada u dhexeeya iOS 9 iyo iOS 8 ee iPhone iyo iPad
Maqaalkani waxaad ku arki kartaa isbarbardhiga sawirada u dhexeeya macruufka 8 iyo iOS 9 halkaas oo aan ka arki karno faahfaahin badan oo yar yar oo lagu daray macruufka 9
HomeKit uma baahna Apple TV inuu shaqeeyo
In kasta oo ay jiraan xan kasta oo horseed u ah qodobka muhiimka ah, HomeKit uma baahna doono TV-ga Apple inuu shaqeeyo.
Soo dejiso muraayada iOS 9
Ku soo dejiso macruufka 9 wallpaper ee iPhone / iPod iyo iPad. Waxaan sidoo kale haynaa sawir weyn oo loo adeegsan karo kombiyuutarka
Sida loo muujiyo / loo qariyo macruufka 9 iCloud Drive app
Apple waxay ku dartay arji si ay u gasho faylalkayaga iCloud Drive ee iOS 9, laakiin waan tusi karnaa ama ka qarin karnaa goobaha
The 7 Jailbreak tweaks in macruufka 9 ayaa isku dhafan / nuqul ka
Apple waxay isku dhaftay 7 Cydia tweaks oo ah nooca cusub ee iOS 9, sidaa darteed mar dambe lagama maarmaan noqon doonto in lagu rakibo marka Jailbreak la heli karo.
IOS 9 waxaa ku jira Trackpad dalwaddii kumbuyuutarka ku yaal
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee iOS 9 ayaa ku yaal kumbuyuutarka. Apple waxay ku dartay trackpad dalwad ah oo naga caawiya, hadda, si loo xakameeyo tilmaamaha.
3 siyaabood oo aad ku keydin doontid meel xusuusta leh iOS 9
In kasta oo aan wax badan laga sheegin mowduuca, macruufka 9 wuxuu leeyahay 3 qaaciido oo lagu keydiyo meel lagu keydiyo xusuusta qalabkaaga. Waan kuu sheegeynaa!
Sida hoos loogu dhigo iOS 9 beta ilaa iOS 8.3
In kasta oo dadweynuhu wali aysan rakibi karin macruufka 9 beta, waxaan dooneynaa inaan sharaxno tallaabooyinka la raacayo si hoos loogu dhigo macruufka 9 ilaa iOS 8.3.
Top 10 Astaamaha Cusub ee iOS 9
In kasta oo aan horeyba kaaga sheegnay waxyaabaha cusub ee iOS 9, maanta waxaan rabnaa inaad ku ogaatid iyaga muuqaalkan haddii aad seegtay.
Sidee iOS 9 Awoodda Awoodda Hoose u Shaqeysaa
Habka tamarta yar waa mid ka mid ah wararka ugu muhiimsan ee imaan doona macruufka bisha Sebtember ee soo socota. Waxaan soo bandhigeynaa sirta shaqadan cusub
Shaqooyin badan oo muddo dheer la sugayay oo ku saabsan iOS 9 ee iPad-yada, oo faahfaahsan
Apple ayaa shalay soo bandhigtay shaqooyin badan oo cusub oo iOS 9 ah oo loo qeybiyay seddex qaab: kala qeybinta muuqaalka, Sawirka Sawirka iyo Muuqaalo Dheeraad ah
Waxyar oo qarsoon oo macruufka 9 ah ayaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso
IOS 9 waxay leedahay faahfaahin badan oo yar oo aan la dareemi karin haddii aanaan fiiro gaar ah u yeelan. Qodobkaan waxaan ku tuseynaa midka ugu xiisaha badan
macruufka 9 Beta 1 waa lagu rakibi karaa iyada oo aanad noqon horumariye. Waan sharaxeynaa sida
Sidii ay ugu dhacday macruufka 7 iyo macruufka 8, waxaan ku rakibi karnaa iOS 9 beta 1 annaga oo aan UDID-da iPhone-keena ka diiwaan gashan horumariye. Waan sharaxeynaa sida
7 sababood oo aan loo rakibin macruufka 9 Beta 1
In kasta oo ay macquul tahay in la isku dayo dhammaan wararka la socda macruufka 9, waxaan kuu sheegeynaa 7 sababood oo ah inaadan rakibin beta 1 noocaas
Lambarka amniga ee iOS 9 wuxuu noqon doonaa 6 lambar
IOS 9 waxay ugub ku tahay kororka amniga iyadoo adeegsaneysa lambar amni oo lix-god ah oo ka dhigaya xoog wax ku muquuninta weerarada.
Qoraalka muhiimka ah ee WWDC waa la dhammeeyay waxaanan horeyba u heynaa sawirradii ugu horreeyay ee macruufka 9. Shaashadda shaashadda ee qoraalkan waxaad ku arki doontaa xoogaa war ah.
Maanta, daqiiqado uun kahor, Apple waxay soo bandhigtay iOS 9. Laakiin goorma ayey heli doontaa qof walba oo suuqa jooga? Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan bilaabista.
Imaatinka iOS 9 ee iPad 2 iyo iPhone 4S waa la xaqiijiyay
IOS 9, oo ah nidaamka hawlgalka ee soo socda ee la sii deyn doono bisha Sebtember, ayaa lagu awoodi doonaa in lagu rakibo iPad 2 iyo iPhone 4S. Ma jiraa qof wax intaa ka badan bixiya?
Maxaan ka filan karnaa Muhiimadda Apple?
Wax ka yar hal maalin ayaa ka hartay soo bandhigida Apple waxaana kuu sheegeynaa waxa aan ka filan karno.
Qalabka koowaad ee loogu talagalay HomeKit ayaa imaan kara usbuuca soo socda
Qalabka ugu horreeya ee leh 'HomeKit' ayaa la arki karaa toddobaad gudihiis.
Waxaan kuheli doonnaa warar dheeri ah iOS 9
IPad News waxaan uga hadleynaa dhammaan wararka ku jira iOS 9 oo aan weli laga hadlin, isbeddelada kumbuyuutarka, iMessages iyo Force Touch.
Nooca Faahfaahinta ayaa sharraxaysa sababta ay Apple u isticmaasho San Francisco sidii font
Websaydh caan ku ah qorista qoraalka ayaa sharraxaya sababta ay Apple u bilaabatay adeegsiga farta San Francisco ee nidaamyadeeda hawlgalka.
IOS 9 iyo OS X 10.11 waxay diiradda saari doonaan "tayada" waxayna hagaajin doonaan waxqabadka aaladaha duugga ah
Nidaamyada soo socda ee Apple, iOS 9 iyo OS X 10.11, waxay diiradda saari doonaan hagaajinta guud ahaan waxqabadka nidaamka iyo xoojinta amniga.
Fikraddan macruufka 9 waxay na siineysaa shaashad gebi ahaanba cusub
Ku raaxayso fikraddan cajiibka ah ee macruufka 9 ee fiidiyaha si aad u aragto qaar ka mid ah hagaajinta ay Apple ku dari karto.
'Helitaan deg deg ah', mid ka mid ah fikradaha ugu horreeya ee iOS 9
WWDC 2015 ayaa soo socota fikradaha ugu horreeyaana waxay gaarayaan internetka, fikradan koowaad ee iOS 9 waxaan aragnaa shaashad quful u qaybsan saddex qaybood
Waxa aan jeclaan lahaa inaan ku arko iOS 9 intii lagu jiray WWDC 2015
8da Juun waxaan la kulmi doonaa iOS-ka cusub 9. Kuwaani waa qaar ka mid ah waxyaabaha aan jeclaan lahaa inaan ku arko nidaamka cusub ee Apple ku shaqeeya
Fikrad cusub oo ku saabsan iOS 9 waxay na siisaa warar xiiso leh
Fikradda macruufka 9 ee warka cajiibka ah ee Apple ay ku hirgelin karto nidaamkeeda iPhone ama iPad inta lagu jiro WWDC 2015.
Apple wuxuu qarin karaa teknoolojiyada 32-bit ee iOS 9
Apple waxay qorsheyneysaa inay xoqdo, iyadoo nooca cusub ee nidaamkeeda hawlgalka, iOS 9, aaladaha ku shaqeeya tiknoolajiyadda 32-bit.
Liistada Rabitaankayga ee iOS 9
Maxay yihiin wararka ay iOS 9 ku dari karto? Tani waa liistada rajadayda
Maxaa laga filayaa macruufka 9?
Isku soo wada duub wararka xanta ah, codsiyada wadajirka ah iyo codsiyada shaqsiyadeed ee ku wajahan iOS 9, oo ah nidaamka soo socda ee mobilada uga shaqeeya Apple.
IOS 9 fikrad ku rakiban astaamo cusub
Fikradda macruufka 9 ee iPhone oo leh astaamo badan oo cusub si loo hagaajiyo nidaamka hawlgalka moobiilka ee Apple ee la sii deyn doono 2015.